Miyuu Saxeexa Taariikhda Arsenal Ugu Qaalisan Ee Nicolas Pepe Kusoo Bilaaban Doonaa Kulanka Burnley Ee Berrito? Unai Emery Ayaa Ka Jawaab Celiyay. - Gool24.Net
Miyuu Saxeexa Taariikhda Arsenal Ugu Qaalisan Ee Nicolas Pepe Kusoo Bilaaban Doonaa Kulanka Burnley Ee Berrito? Unai Emery Ayaa Ka Jawaab Celiyay.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka hadlay wax ku saabsan saxeexa ugu qaalisan taariikhda kooxdaas ee Nicolas Pepe iyo haddii uu kusoo bilaabi doono shaxdiisa kulanka Burnley ay berrito qaabili doonaan.
Arsenal ayaa berri maraysa tijaabadeedii ugu horreysay ee ay Emirates Stadium ku ciyaarayso horyaalka Premier League waxaana ay qaabilayaan wiilasha tababare Sean Dyche oo 3-0 kusoo guuleystay toddobaadkii hore.
Sidoo kale Gunners ayaa toddobaadkii hore guul ku furtay horyaalka kaddib markii ay 1-0 kaga soo guuleysteen kooxda Newcastle United kulan uu go’aamiyay Aubameyang.
Kulankaas ayaa ahaa mid shaxda tababare Emery ay ahayd mid aysan ku dhex arag dhammaan saxeexyada cusub ee kooxda ee Nicolas Pepe, David Luiz, Dani Ceballos iyo Martinelli.
Maqnaanshaha Pepe ayaa si gaar ah u noqday waxa ay is weydiinayeen jamaahiirta Arsenal maadaama oo uu yahay saxeexooda ugu qaalisan abid waana su’aal ay haatan saxaafadu Emery hor dhigtay haddii uu Pepe usoo xulanayo kulanka berri.
Tababaraha ree Spain ayaa sheegay inuu go’aanka gaadhayo kaddib tababarka ay kooxdiisu qaadan doonto maanta oo Jimce ah iyadoo ay waxkasta ku xidhan yihiin qaabka ay tababarka iskugu muujiyaan.
Emery ayaa yidhi “Waxaan go’aansanayaa Jimcaha sababtoo ah haatan (Iyo tababarka kaddib) waa kala duwanaansho yar oo go’aankayga ah oo ku saabsan ciyaartoyga”.
“Waxa ay ku xidhantahay sida ay berri (Maanta) ku noqon doonaan tababarka, Laakiin Pepe wuu nala tababarayanaa anaga, Wuu nala horumarayaa anaga, Anaga ayuu na baranayaa, Aragtidayada ayuu baranayaa, Qaabkayaga ayuu baranayaa waxaana uu awoodayaa inuu si ka wanaagsan u fahmo xiddigaha ay koox wadaaga yihiin”.